Home Wararka Maanta Gacan yaraha Fahad Yaasiin oo weji gabax la kulmay & Go’aano laga...
Gacan yaraha Fahad Yaasiin oo weji gabax la kulmay & Go’aano laga qaadanayo doorashada
Dhawaan C/raxmaan Kulmiye xersi (C/raxmaan Dheere) oo tegay Magaalada Jowhar Ee Caasimada Hirshabelle ayaa la sheegay in uu natiijo la’aan kaga soo laabtay halkaasi iyo wixii uu utegay.
Xildhibaan C/raxmaan Dheere oo ah gacan yaraha Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa Jowhar kula kulmay Madaxweyne Cali Guudlaawe oo ay ugu muhiimsaneyd liiska xildhibaano uu watay in lasoo saaro.
Kuraasta golaha shacabka ee taalla Jowhar iyo B/weyne ayuu Fahad Yaasiin uxilsaaray C/raxmaan Kulmiye Xersi inuu wakiil uga noqdo si gaar ahna kursigiisa loo sii xiro.
Qorshaha Nabad iyo nolol ay wadatay ayaa ahaa in Xildhibaano gaar ah la doonayo in Hirshabelle laga soo saaro balse waxaa soo baxday in dalabkaasi uu si dadban udiiday Cali Guudlaawe oo ah Madaxweynaha Maamulkaasi.
Xildhibaan C/raxmaan Dheere oo qudhiisa wel wel ku jira kursigiisa ayaa hadana waxa uu jowhar kasoo laabtay markii uu ku qanci waayey qorshaha uu watay oo laga diiday.
Shirka oo ahaa mid albaabada uxirnaa ayaa waxa laga qariyey saxaafada waxyaabaha kasoo baxay balse in is afgaran waa inuu dhacay ayaa lasoo tebiyey.
Dagaal siyaasadeedka ay wajahayaan Nabad iyo nolol oo dhinacyo badan leh ayaa waxa hadda umuuqdaa mid Hirshabelle ay lumin karaan kuraastii ay ku xisaabtaamayeen.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah ninka ugu awooda badan ee Dawlada Soomaaliya ayaa sababta uu uraadinayo xilka Golaha Shacabka ah inuu xasaanad ku helo si aan si fudud loo xirin oo qaladaad dhacay intuu NISA iyo Madaxtooyada ka shaqeenayey lagu soo eedeeyo.
Kursiga Faarax Sheekh C/qaadir ku fadhiyo ayuu doonayaa inuu helo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse hadii uu ku guuldareysto waxay ubadan tahay inuu saldhigto Dalka Qatar oo dhalasho jinsiyada labaad uu ka heysto.
Soo laabashada Madaxweyne Farmaajo hadii ay suurta geli weyso waxa sidoo kale dacwado lagu soo oogi karaa xubno hadda awood ciidan iyo mid taageero dhaqaale heysta xitaa Farmaajo ayaa maxkamad laga soo dacweyn karaa.
Hardanka socda iyo halka uu ku dambeyn doono ayaa la sugayaa xilli go’aano culus ay Fahad iyo saaxiibadiisa Xukunka heysta ay waqti ku bixinayaan inay helaan guul xilliga ugu dambeeya xitaa ha noqotee.